ILevitikus 16 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
4 Uya kwambatha inguboingubo engcwele yangaphantsi yelinen emhlophe, ibekho nebhulukhwe yelinen emhlophe emzimbeni wakhe, abhinqiswe ngombhinqo welinen emhlophe, ajikele unkontsho lwelinen emhlophe: ziingubo ezingcwele ezo. Wowuhlamba umzimba wakhe emanzini, azinxibe ke.
5 Wothabatha ebandleni loonyana bakaSirayeli iinkunzi zeebhokhwezeebhokhwe ezixhonti zibe mbinimbini, zibe lidini lesono, nenkunzi yemvu enye ibe lidini elinyukayo.
7 Wozithabatha iinkunzi zeebhokhwezeebhokhwe zombini, azimise phambi koYehova, emnyango wentente yokuhlangana;
8 enze amaqashisoamaqashiso uAron phezu kweenkunzi zeebhokhwezeebhokhwe zombini: elinye iqashiso libe lelikaYehova, elinye iqashiso libe lelika-Azazele.
13 asibeke isiqhumiso phezu komlilo phambi koYehova, ukuze ilifuilifu lesiqhumiso lisisibekele isihlalo sokucamagusha esiphezu kwesingqino, ukuze angafi.
15 Woyixhela inkunzi yebhokhwe yedini lesono eyeyabantu, alise igaziigazi layo ngaphaya komkhusane, alenze igaziigazi layo njengoko walenzayo igaziigazi lenkunzi entsha yenkomo, alifefe esihlalweni sokucamagusha nangaphambili kwesihlalo sokucamagusha;
16 ayicamagushele ingcweleingcwele ngenxa yobunqambi boonyana bakaSirayeli, nangenxa yezikreqo zabo ngokubhekisele ezonweni zabo zonke; enjenjalo kwintente yokuhlangana ehleliyo nabo phakathiphakathi kobunqambi babo.
20 agqibe ukuyicamagushela ingcweleingcwele nentente yokuhlangana, nesibingelelo. Woyisondeza inkunzi yebhokhwe ephilileyo,
21 acinezele uAron ngezandla zakhe zozibini entlokweni yenkunzi yebhokhwe ephilileyo, abuvume phezu kwayo bonke ubugwenxaubugwenxa boonyana bakaSirayeli, nezikreqo zabo zonke ngokubhekisele ezonweni zabo zonke, azibeke ke phezu kwentloko yenkunzi leyo yebhokhwe, ayithumele entlango ngendoda ezilungisele oko.
22 Inkunzi leyo yebhokhwe yobuthwala ke phezu kwayo bonke ubugwenxaubugwenxa babo, iye ezweni eliqhiwukileyo; ayikhulule inkunzi yebhokhwe leyo entlango apho.
23 UAron wongena ententeni yokuhlangana, azihlube iinguboiingubo zelinen emhlophe, abezambethe ukungenaukungena kwakhe engcweleni, azishiye khona;
24 awuhlambe umzimba wakhe ngamanzi endaweni engcwele, anxibe iinguboiingubo zakhe, aphume, enze idini lakhe elinyukayo, nedini elinyukayo labantu, azicamagushele okwakhe nokwabantu;
26 Lowa wayikhululela kuAzazele inkunzi yebhokhwe, wozihlamba iinguboiingubo zakhe, awuhlambe umzimba wakhe emanzini, emveni koko angene eminqubeni.
28 Lowo uzitshisayo wozihlamba iinguboiingubo zakhe, awuhlambe umzimba wakhe emanzini, emveni koko angene eminqubeni.
29 Koba ngummiselo ongunaphakade kuni, ukuthi: Ngenyanga yesixhenxe, ngolweshumi enyangeni leyo, niyithobe imiphefumloimiphefumlo yenu, ningenzi namnye umsebenzi, nokuba ngozalelwe ekhaya, nokuba ngumphambukeli ophambukele kuni,
31 Yisabatha kasabatha kuni; noyithoba imiphefumloimiphefumlo yenu: ngummiselo ke ongunaphakade.
32 Wocamagusha ke umbingeleli, lowo uya kuthanjiswa, amiselwe ukuba abe ngumbingeleli esikhundleni sikayise; azinxibe iinguboiingubo zelinen emhlophe, iinguboiingubo ezingcwele;
33 ayicamagushele ingcweleingcwele kangcwele, nentente yokuhlangana, asicamagushele isibingeleloisibingelelo, abacamagushele ababingeleliababingeleli, nabantu bonke besikhungu.
34 Lowo woba ngummiselo ongunaphakade kuni wokubacamagushela oonyanaoonyana bakaSirayeli ngenxa yezono zabo zonke, kube kanye ngomnyaka. Wenza ke njengoko uYehova wamwisela umthethoumthetho uMoses.